တရုတ် Yangzhong Luck စတားတံဆိပျ - တောင်ကိုရီးယားနှင့်အတူလွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်အတားရှင်းလင်းရေး
တောင်ကိုရီးယား၏အဆိုပါအမျိုးသားလွှတ်တော်တောင်ကိုရီးယားရဲ့အာဏာရ Saenuri ပါတီနှင့်ဒီမိုကရေစီများအတွက်အဓိကအတိုက်အခံပါတီနယူးနိုင်ငံရေးမဟာမိတ်အပြီးဘေဂျင်းနှင့်အတူနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးသဘောတူစာချုပ်မှအစိမ်းရောင်အလင်းကို ပေး. , ကစက်မှုလုပ်ငန်းပံ့ပိုးပေးရန်ထိရောက်သောအစီအမံယူရန်လိုအပ်သောခဲ့ကြောင်းသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။
ဆိုးလ်မြို့ကနေအစိမ်းရောင်အလင်းသြစတြေးလျအစိုးရနှင့်အတိုက်အခံအလုပ်သမားပါတီမှပြီးခဲ့သည့်လကသဘောတူညီချက်အပေါ်တစ်ဦးအပေးအယူရောက်ရှိပြီးနောက်တရုတ်-သြစတြေးလျ FTA, ယခုနှစ်မကုန်မီသြစတြေးလျ၏လွှတ်တော်ကအတည်ပြုစေခြင်းငှါအစီရင်ခံစာများ၏ဒေါက်အပေါ်အနီးကပ်လာပါတယ်။
နှစ်ဦးစလုံး FTAs ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်သွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်အခွန်များဖယ်ရှားရေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပြီးကတည်းကသူတို့တရုတ်ပိုမိုထုတ်ကုန်တင်ပို့အဖြစ်က၎င်း၏ကြီးမားသောစျေးကွက်နှင့်စားသုံးသူမှအမြတ်ရရှိမှုနိုင်အောင် "နှစ်ဖက်စလုံးကအဖြစ်အစောပိုင်းဖြစ်နိုင်သမျှအတိုင်းအပေးအယူနိဂုံးချုပ်အပေါ်စိတ်အားထက်သန်နေကြသည်, "လင်း Guijun ဘေဂျင်းနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးနှင့်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်မှဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားခဲ့သည်။
Lin က China-စင်္ကာပူသို့မဟုတ် China-နယူးဇီလန် FTAs 2008 ခုနှစ်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့မတူဘဲ China-တောင်ကိုရီးယားနှင့်တရုတ်နိုင်ငံ-သြစတြေးလျ FTAs န်ဆောင်မှုကုန်သွယ်ရေးအပေါ်ဆောင်းပါးများကိုချီတက်ခဲ့ကြဟုဆိုသည်။ နှစ်နိုင်ငံစလုံးတရုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်အဓိကရေခြားမြေခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနေရာများဖြစ်ကြသည်အဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလည်းအရေးကြီးပါသည်။
တောင်ကိုရီးယားရဲ့ပို့ကုန်အားနည်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝယ်လိုအားကိုညွှန်း, တရုတ်နိုင်ငံသို့တင်ပို့ရောင်းချမှုအတွက်မတ်စောက်သောရေတံခွန်, United States နှင့်ဥရောပနှင့်အတူ, အောက်တိုဘာလအတွက်ထက်ပိုမိုခြောက်နှစ်အတွင်းအများဆုံးငြင်းဆိုခဲ့သည်။
တရုတ်, နယူးဇီလန်နှင့်ဗီယက်နမ်နှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုး - - သူတို့ကဒီနှစ်ကုန်ခြင်းဖြင့်ထိရောက်သောဖြစ်လာကြောင်းသေချာစေရန်တိုင်းပြည်၏ဝင်ငွေစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန်ရန်စိတ်အားထက်သန်, တောင်ကိုရီးယားသမ္မတ Park Geun-hye ကအကြိမ်ကြိမ်လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်မှုသဘောတူညီချက်များ၏နံပါတ်အတည်ပြုအမတ်များကိုဖိထားသည်။
မဟာဗျူဟာနှင့်ဘဏ္ဍာရေး၏တောင်ကိုရီးယားရဲ့ဝန်ကြီးဌာန FTA အတည်ပြုချက်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်နှောင့်နှေးယင်း၏ပို့ကုန်-oriented ကုမ္ပဏီတွေထက်ပို 22 သန်းယွမ် ($ 3.44 သန်း) ၏နေ့စဉ်ဆုံးရှုံးမှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်ကြောင်းသတိပေးခဲ့သည်ခဲ့သည်။
တရုတ်အကောက်ခွန်အချက်အလက်များအရသိရသည် 2014 ခုနှစ် $ 235,4 ဘီလီယံခန့်မှာနှစ်ဖက်အကြားကုန်သွယ်ရေးနှင့်အတူ, တောင်ကိုရီးယားရဲ့အကြီးမားဆုံးကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံအဖြစ်က၎င်း၏အကြီးမားဆုံးပို့ကုန်စျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယားကိုလည်းယခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှဇန်နဝါရီလကနေဖန်ဆင်းတော် $ 2.25 ဘီလီယံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူတရုတ်နိုင်ငံ၏အဓိကနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများတစ်ခုဖြစ်သည်။
Zhang က Jianping, အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကော်မရှင်မှာနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး Institute ၏ညွှန်ကြားရေးမှူး၎င်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုယုံကြည်, တောင်ကိုရီးယားလည်ပတ်မှုန်ဆောင်မှုကုန်သွယ်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး, ခရီးသွားလုပ်ငန်း, ရေကြောင်း, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု, ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စမတ်-မြို့ဖှံ့ဖွိုးတိုးနဲ့တူဆက်စပ်ကဏ္ဍများအတွက်တတ်ကျွမ်းဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကဆိုပါတယ် China-တောင်ကိုရီးယား FTA ကြွယ်ဝပြည့်စုံနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလောင်စာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမော်ဒယ်များကတဆင့်အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
သြစတြေးလျအစိုးရနှင့်ကုမ္ပဏီများလည်းသူတို့က၎င်း၏စွမ်းအင်နှင့်ကုန်စည်ထုတ်ကုန်များနှင့်စီးပွားရေးပို့စ်များကိုနှေးကွေးကြီးထွားအဖြစ်ပိုပြီးခက်ခဲလည်ပတ်မှုအခွအေနအဘို့, အထူးသဖြင့်, ကဲ့သို့အားနည်းပါသည်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်ဝယ်လိုအားကိုတွေ့မြင်သောအရာကိုအကြောင်းကို ပို. ပို. စိုးရိမ်ပူပန်ရှိပါတယ်။
" သို့ဖြစ်. အဘယ်သူမျှအခြမ်းထိုကဲ့သို့သောအကြီးအခွင့်အလမ်းကိုလက်လွတ်ဖို့နဲ့အဖြစ်အစောပိုင်းတတ်နိုင်သမျှဥပဒေပြုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးမြောက်ရန်စိတ်အားထက်သန်ပါလိမ့်မယ်လို။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, အစောပိုင်းငှက်တို့သည်တရုတ်ထံမှပိုပြီးတင်ပို့မှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုရရှိနိုင်သည် "ဟု Zhang ကပြောခဲ့သည်။
တရုတ်က၎င်း၏ပို့ကုန်စာရင်း၏ထိပ်မှာကုန်စည်, သဘာဝအရင်းအမြစ်များနှင့်စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များနှင့်အတူပြီးသားသြစတြေးလျ၏အကြီးဆုံးစျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နှင့်သြစတြေးလျအကြားကုန်သွယ်ရေး volumes ကိုသြစတြေးလျပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကတရုတ်နှင့်အတူ $ 9.4 ဘီလီယံခန့်ကုန်သွယ်မှုပိုလျှံခဲ့ 2014. အတွက် $ 136,9 ဘီလီယံ 2010 ခုနှစ်က $ 88,1 ဘီလီယံရှိရာမှခုန်တက်။